Talaado, September 6, 2016 Douglas Karr
Badanaa maahan inaan halkan ku helo kitaabiga, laakiin tani waa mid ka mid ah waqtiyadaas! Sidaa darteed qof kasta oo ereyadaydan maqla oo yeela, waxaa loo ekaysiinayaa nin caqli badan oo gurigiisa ka dul dhisay dhagaxa. Matayos 7:24 Blab Bishii Ogosto, Blab wuu xidhay. Madal aad u tiro badan oo raashin badan lehna tan ballamo ah… waxay noqotay kapoof. Sheekada oo dhan waxaa wadaaga aasaasaha Shaan Puri oo ku saabsan Dhexdhexaad. Isaga